कोरियामा लगातार २ दिनदेखि दैनिक संक्र-मित घट्दो ! – Patrika Nepal
कोरियामा लगातार २ दिनदेखि दैनिक संक्र-मित घट्दो !
पुष ६, २०७८ मंगलबार 38
दक्षिण कोरियामा दैनिक कोरो’ना सं’क्रमितहरुको संख्यामा केहि सुधार देखिएको छ। मंगलबार यहाँ लगातार दोश्रो दिनका रुपमा ६ हजारभन्दा तल सं’क्रमित थपिएका छन।
दैनिक सं’क्रमितहरुको संख्या घटेता पनि को’भिडका सि’किस्त बि’रा’मीहरुको संख्या भने पुन एकपटक १ हजारभन्दा माथि पुगेको छ। कोरियामा मंगलबार थप ५ हजार २ सय २ जनामा सं’क्रम’ण पुष्टि भएको छ जसमध्ये ५
हजार १ सय ४४ जना कोरिया भित्रकै स्थानिय सं’क्रमित हुन भने बाँकी विदेशबाट आएकाहरुमा देखिएको सं’क्रम’ण हो। मंगलबार थपिएकाहरुको संख्या समेत जोड्दो कोरियामा कुल सं’क्रमितहरुको संख्या ५ लाख ७५ हजार ६ सय १५ पुगेको छ।
कोरियामा आ’इसियु बेडको ‍औषत उपलब्धता सोमबार साँझ ५ बजेसम्म ८०.७ प्रतिशत रहेको पाइएको छ। तर सउल र त्यसवरपरको क्षेत्रको यस्तो रेट ८७.७ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यो संख्या ७५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेपछि अवस्था बि’ग्रिएको भन्ने बुझिन्छ।
मंगलबार मध्यरातको तथ्याङ्कअनुसार सउल क्षेत्रमा ४ सय २० जना को’भिडका बि’रा’मी अ’स्पताल भर्नाको पर्खाइमा रहेका छन जसको घरमै उपचार भइरहेको छ। त्यसैगरी मंगलबार कोरियामा थप ४९ जना ओमिक्रोन भेरियन्टका सं’क्रमित थपिएका छन।
यो सँगै कोरियामा ‌ओमि,क्रोन भेरि,यन्ट पुष्टि हुनेहरुको कुल संख्या २ सय २७ पुगिसकेको छ। को’रोना फै’लि’एसँगै दक्षिण कोरियाली सरकारले शनिवारबाट देशभर सामाजिक दूरीका नि’यममा क’डाई गरेको थियो। कोरियामा आउँदो जनवरी २ तारिखसम्म यस्तो क’डाई गरिने बताइएको छ ।
Prevयि अभिनेत्रीसंग विवाह गर्न तोडेका थिए गोबिन्दाले सुनितासंग इन्गेजमेन्ट, किन भएन विवाह ?
NextRIP बैंककै बाथरुममा किन गइन् अनुपमा ? कसरी भयो रहस्यमय मृत्यु !😭😭🙏🙏 जति बिजी भएपनि कृपया केहि मिनेट समय दिएर पढ्नुहोला,यति दु,खदाइ अबस्थामा कसको के लाग्छ र ?